2.12.2016 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
အက်ဆစ်ထွက်တဲ့အစားအစာများများစားရင် ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်ပါသလား? အစားအစာတွေမှာ အက်ဆစ်ပါဝင်မှုနဲ့ ရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အစားအစာတွေအကြောင်းကို...
ကလေးငယ်များနှင့် G6PD အင်ဇိုင်း ချို့တဲ့ခြင်း (ဖွံ့ဖြိုးကျန်းမာကလေးများကမ်ဘာ-အပိုင်း 1)
2.12.2016 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
G6PD လို့ အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ Glucose6Phosphate Dehydrogenase (G6PD) ဟာ သွေးနီဥတွေအလုပ် ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်အောင်ကူညီနေတဲ့ အင်ဇိုင်းတစ်မျိ...
1.12.2016 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
1. ပြုတ်ကျသကဲ့သို့ ခံစားရခြင်း
အိပ်နေစဉ်အတွင်း တစ်စုံတစ်ခုကနေ ပြုတ်ကျလာသလိုခံစားရတာကို hypnagogic...
အရင်ကတော့ အသည်းကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုရှားပါးပေမယ့် 1990 ခုနှစ်လောက်ကစပြီး ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း2ဆတက်လာခဲ့ပါတယ်။ အသည်းကင်ဆာရောဂါလက္ခဏာတွေက အသည်းရဲ...
ဘာတွေက ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို မြင့်တက်စေတာလဲ
30.11.2016 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
အရက်သေစာ၊ ပဋိသနေ္ဓတားဆေး၊ BRCA gene (မျိုးရိုးဗီဇ)၊ ဘယ်အရာတွေက ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းကို မြင့်တက်စေတာပါလဲ။ ကင်ဆာပညာရှင်...